Fandefasana - Buddhatrends
Mandefa iraka erak'izao tontolo izao isika manerana an'i Amerika Avaratra sy Atsimo, Eorôpa, Azia, Afrika, Oseania, ary misimisy kokoa. Ampiasainay ireo serivisy ireo mpandraharaha iraisampirenena lehibe sy azo itokisana mba hahazoana antoka fa ho tonga soa aman-tsara any amin'ny toerana misy anao ny entana.
Ny baiko matetika dia manomboka amin'ny 7 andro hivezivezy alohan'ny sambo - amin'ny faran'ny herinandro sy ny fialantsasatra. Mety mandritra ny andro XMUMX mandritra ny andro fitsaboana.
Ny baiko amerikana dia alefa amin'ny e-packet ary ny International Orders dia alefa arakaraka ny foibe fahatanterahan'ny vokatra.
Transit Times ho an'i Etazonia: 12 - 20 Andron'ny asa
Misy toe-javatra tsy misy fifehezana (loza voajanahary, fialantsasatra, toetrandro, sns) izay mety miteraka fanemorana entana. Na dia ho tonga ara-potoana aza ny ankamaroan'ny fonosana, dia mety hisy toe-javatra sy fahatarana mety ho hitan'ny mpividy. Noho izany antony izany dia tsy manome antoka isika ny fotoana marina handefasana; Ny adiresy famindrana dia ny andraikitry ny orinasa misahana ny fifamoivoizana.
Ny tolotra torolàlana dia miankina amin'ny foibe fahatanterahantsika. Izany dia satria avy any amin'ny firenena samihafa ny vokatra azontsika mba hahazoana antoka fa hahazo ny vidiny tsara indrindra ianareo. Ny serivisy fampitaovana dia tsy mitovy amin'ny firenena. Raha tsy misy orinasam-pandraharahana matanjaka amin'ny serivisy iraisam-pirenena, dia tsy afaka mahazo tombombarotra tsaratsara kokoa izahay noho ny haingam-pandeha izay ho very eo amin'ny tsena iraisam-pirenena tahaka ny Amazonia sy ny sisa.
Manao izay tsara indrindra vitantsika isika mba hampihenana ny fandaniana amin'ny fiafaranareo ka tsy mila mandoa hetra avo lenta / premiums mba hahazoanareo zavatra. Raha mametraka baolina miaraka aminay ianao ho an'ny zavatra marobe, dia mihoatra noho ny azo inoana fa alefa any amin'ny fonosana mihoatra ny iray. Azafady azafady mba hahitanao fotoana kely hahatongavana amin'ny zavatra rehetra.
Ny vidin-javatra naseho tamin'ny takelaka tsirairaymety Aza samy hafa amin'izay nandidianao, fa aza manahy. Amin'ny ankapobeny ny zavatra hataon'ny foibe dia ny fanamarihana ho faratampony farafahakeliny, na hanamarika ireo zavatra ireo ho fanomezam-pahasoavana tanteraka. Izany dia ny hisorohana ny fandaniana amin'ny vola / fampiasam-bola manokana amin'ny farany, toy ny any amin'ny firenena sasany, ireo fiampangana fanampiny ireo dia tena lafo be.
Any an-trano dia afaka mandray ilay fonosana amin'ny anaran'ny mpanjifa. Amin'ny ankapobeny dia handao famoriam-bola ny mpiasan'ny fandefasana raha tsy misy olona ao an-trano ary afaka manangona ny fonosanao amin'ny biraonao akaiky indrindra ianao.
Na dia mamporisika anareo hanamarina ny habeny sy ny adiresy alohan'ny hametrahana baiko miaraka amintsika aza izahay, dia takatsika tsara fa misy ny zava-mitranga ary misy ny fahadisoana azo atao. Manao ny baiko amin'ny andro mitovy azy ireo izahay. Raha mila fanovana ny baikonao, miangavy anao amin'ny alàlan'ny taratasy fifandraisana amin'ny tranokalanay ASAP ary hanao izay tsara indrindra vitantsika isika hiatrehana izany fiovana izany, fa tsy afaka manao fampanantenana. Raha efa nalefa tany amin'ny foibe fanatanterahana ny singa (s) dia tsy afaka manova ny baiko isika. Amin'io tranga io, azonao atao ny mandefa ilay entana any amin'ny Warehouse Regional akaiky indrindra ary nahazo alalana afaka mandefa zavatra voaova. Azafady mba mifandraisa aminay mba hahafantarana hoe aiza no misy ny Regional Warehouse akaiky indrindra avy amin'ny firenenao.
Azafady mba mifandraisa aminay, ary ho faly izahay hamaly ny fanontanianao!